Bitcoin Debit Kaadị Comparison 2018 - Bitcoin E Si Nweta Kaadị
TOP Bitcoin Debit Kaadị – a kaadị Ego Card Comparison
Bitcoin bụ ego nke internet – na na a Bitcoin E Si Nweta Kaadị, ị nwere ike ịkwụ n'ebe ọ bụla n'ụwa nile ebe Ebe E Si Nweta- ma ọ bụ Debit Cards na-nabatara na kaadị Ego gị oke. Ọnụ na a Bitcoin obere akpa, i nwere ike na-eji dochie ihe 95% nke niile ọrụ a nkịtị Bank nwekwara ike na-enye gị.
Na nnukwu ihe dị iche na i nwere ngụkọta achịkwa gị ego itule na-adịghị onye ọzọ. Nke a bụ uru nke ego. Enwe nnwere onwe. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ banyere ịzụ a Bitcoin Card, jide n'aka na-elele anyị “Olee otú ịhọrọ” ndu below.
Spectrocoin Bitcoin Card – Uru na ọghọm
+ All mba gburugburu ụwa gụnyere
+ Apps maka Windows mobile ọrụ kwa
+ Company kaadị dị
– oké ọnụ mbupu
– Ojoro akụkọ na mkpesa
– Ne ọmụma si website
amaonye Card: Ee
plastic Card: Ee
Virtual Card: Ee
kaadị Price: plastic $9.00/€ 8.00 / £ 6,00 – Virtual $0.50/€ 0,50 / £ 0,50
ego: USD, EUR, GBP
Foreign Azụmahịa ego: 3%
loading ego: Free
Monthly ego: $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
Cryptopay Bitcoin Card – Uru na ọghọm
+ Atọ bụ isi ego (EUR, GBP, USD) na-niile ikike
+ Free mbupu uwa dum
+ Weebụsaịtị ọma e na mfe iji
– Naanị maka EU ụmụ amaala
– Higher ahịa
– Foreign azụmahịa ego
kaadị Price: plastic 15 € / £ / $ – Virtual 2.50 € / £ / $
ego: EUR, GBP, USD
loading ego: 1%
Monthly ego: $1
WageCan Bitcoin Card – Uru na ọghọm
+ Dị ọtụtụ mba tinyere USA
+ Founders na ike na nkà na ụzụ ndabere
+ Dị na USD, EUR, GBP
+ ego mmemme
– Oké ọnụ kaadị ego
– Ozi siri ike ịhụ na website
– The dị ọnụ ala karịa kaadị bụ nke ngwaahịa
amaonye Card: No
kaadị Price: site 0.025 BTC
AdvCash Bitcoin Card – Uru na ọghọm
+ Ọ dịghị kwa ọnwa mmezi ego
+ Ete dị ka dị ego
+ Free n'elu si Swift / SEPA-enyefe, ọnụego ewepụghị maka enyefe
– Ọ dịghị ngwa ọdịnala dị
– Naanị EU N'ókèala akwado
– Ọ dịghị ihe ọmụma banyere nwe mebere atumatu ma uloru
– Daily ókè na ịzụrụ n'ihi na ọbụna kwupụtara ọrụ
kaadị Price: plastic $/€ 4.99 (14.99 mgbe 7 ụbọchị) – Virtual 1 + 0.99 $/€ ego
ego: EUR, GBP, USD, ete
Foreign Azụmahịa ego: 2.95%
loading ego: $/€ 0.99 kwa azụmahịa
Monthly ego: Free
CoinsBank Bitcoin Card – Uru na ọghọm
+ All-na-otu kaadị na-eweta na wallet, mgbanwe na bitcoin debit kaadị
+ N'akụkụ isi fiat ego USD, EUR, GBP, kaadị dị na-ete, CHF, AUD, JPY ego kwa na-enyere litecoin akaụntụ kwa
+ Ọtụtụ kaadị ohere dabeere na nkwenye larịị
– Mgbagwoju na bụghị uzo nwe na ike owuwu
– Free mbupu dị naanị maka adịchaghị ọrụ
– High ụgwọ ide na naa na igwe ndọrọ ego
kaadị Price: plastic si $14.95 – Virtual si $2.95
ego: EUR, GBP, USD, ete, CHF, AUD
Foreign Azụmahịa ego: site 2.5%
Monthly ego: $0.95-$2.95
Uquid Bitcoin Card – Uru na ọghọm
+ Dị na USD, EUR, GBP na 40 dị iche iche altcoins n'akụkụ bitcoin
+ Unlimited ndụ ịzụrụ na igwe ndọrọ ego withdrawals
+ Ọtụtụ loading nhọrọ
– Ogbenye English na-eji na ha na website
– Adịghị n'ihi na US bi
– Fresh ụlọ ọrụ
kaadị Price: Plasitc $1 – Virtual $1
ego: USD, EUR, GBP na 40 dị iche iche altcoins
loading ego: 1.5% – 5%
Xapo Bitcoin Card – Uru na ọghọm
+ Elu larịị nke nche
+ Strong isi obodo Ọdịdị
+ Ọ dịghị n'elu elu ụgwọ
– Mkpuke ọrụ nwere anọru online na naa azụmahịa
– Xapo akwado Segwit2X
– US ụmụ amaala ekwe
kaadị Price: plastic $20 / € 18 / £ 13
Gịnị bụ ihe kasị mma Bitcoin Card m?
Olee otú ịhọrọ nri Bitcoin Card eweta?
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amalite na acha ọkụ na-enye bitcoin debit kaadị n'oge dị ka cryptocurrencies na-inweta ihe na ọzọ na-ewu ewu.
E nwere ụfọdụ ihe ndị a wanna-ike Bitcoin debit Onye Nwe Kaadị nwere ike mkpa anya n'ihi na mgbe na-achọ ndị kasị mma na-eweta. The kaadị enye igosipụta ọtụtụ nke ozi a na ha na saịtị, ka ọ na-ewe nnọọ na-agụ ya site nlezianya. Nweta ihe ọmụma nke kaadị issuer ụlọ ọrụ.
The dum echiche n'azụ bitcoin na ọha na eze blockchain Ledger bụ ịghara ịtụkwasị ha obi. Ya mere bitcoin debit cardholders ndị na-emekarị ihe-enyo anyị enyo ahịa karịa ahịa na ndị ọzọ ọrụ. Ya mere, na enye ga-kwenye ọdịnihu ha ahịa na ha na-enye legit, pụrụ ịtụkwasị obi ọrụ.
Abụkarị na enye enye ihe ndị ọzọ ọrụ karịrị nnọọ a kaadị. Onye ọ bụla nwere a obere akpa, ma n'ihi na ihe atụ Spectrocoin, Cryptopay, CoinsBank, Xapo niile na-agba ọsọ ha bitcoin mgbanwe eme kpọmkwem bitcoin ịzụrụ site na ha weebụsaịtị. Ma ọ bụghị ọrụ nwere inweta cryptocurrencies tupu itinye ha ka nwoke bitcoin debit kaadị.
AdvCash bitcoin debit kaadị nwere atọ isi fiat ego ka USD, EUR na GBP na-nabatara niile na enye. Ete bụ pụta kasị ego, Russian ọrụ nwere ike ịtụ AdvCash bitcoin debit kaadị ebe akụkọ na-denominated na-ete.
Plastic na mebere kaadị ndị na ahịa. The plastic kaadị ga-eji na ma igwe ndọrọ ego withdrawals na online ịzụrụ, kwalite asụsụ ọma na kaadị ike-eji naanị online. Ọ bara uru ịlele n'ihu edebanye ma na-eweta Okwu plastic kaadị ma ọ bụ naanị a virtual nhọrọ dị.
Mgbe ọtụtụ bitcoin debit kaadị na-eweta, ọrụ ike iji ọrụ ọbụna na-enweghị a onye njirimara nkwenye, ọ bụ ezie na ụfọdụ etinyere limites. Ndị a ókè na-agụnye a kwa ụbọchị, kwa ọnwa, nakwa ndụ ókè na ego withdrawals ma ọ bụ na naa ịzụrụ. Ma ọ bụghị nkwenye usoro a na-eme site n'ido a àmà nke njirimara na a ụdị nke a na mba ID kaadị na a gosiri na nke obibi nke nwere ike ịbụ a na ịba uru ụgwọ site n'oge gara aga 3 ọnwa na ọtụtụ nke ikpe. The oge dị mkpa maka nkwenye nwere ike ịdị iche iche a ọtụtụ, si di na nwunye nke awa ọbụna 10 ụbọchị.
Bitcoin Debit Kaadị, nke ịhọrọ?
N'ihi ụkpụrụ na iwu nke ọrụ na United States na-ekwe n'aka ọrụ, ma e wezụga na CoinsBank nke awade mmachi ọrụ US ụmụ amaala.
Mbupu nke plastic kaadị ahịa na-wuru na ụgwọ ndị ọzọ, ka nkịtị mbupu na-abụkarị free, na na enye ebubo banyere 45-70 USD maka expedited nnyefe nhọrọ.
Ọtụtụ n'ime ndị mkpa nwere ama ngwa ọdịnala dị iji jide n'aka na ọrụ ịchịkwa ha ego site ama. Abụkarị iOS na Androids ngwa na-nyere, ma Windows ekwentị ọrụ nwere ike mkpa ịchọ n'ihu, dị ka ọ bụ nanị maka Spectrocoin ahịa.
Kaadị Ịnye ọnụahịa na azụmahịa ụgwọ
The mbụ kaadị nke ụgwọ na-sitere na site 5 USD na 20 USD na nkezi nke 10 USD. Ụfọdụ na-enye naanị virtual kaadị, ma, naanị ihe na-eri 0.5 USD.
Na ụfọdụ ndị na enye ịbụ-adịghị ejekwa ozi na kaadị na-adịghị penalized ma ọtụtụ na-ana ihe mmezi ego maka ịbụ-adịghị ejekwa ozi. Na-adịghị ejekwa ọrụ bụ ndị na-na-adịghị transacting ọbụna mgbe n'ime afọ abụọ na kaadị.
Ahịa nwere ike itinye kaadị na waya na-enyefe ma ọ bụ SEPA-enyefe maka ụgwọ gburugburu 0.5%-1%. Ụfọdụ na enye na-emetụta ewepụghị udu, otú ahịa kwesịrị ntị ka ọnụ ọgụgụ na ego nke ego-agafere si wallet akaụntụ na debit kaadị. E nwere nhọrọ Ibu Ibu na ibuputa na ọzọ ugwo na enye ndị dị otú ahụ dị ka Skrill, Neteller ma ọ bụ PayPal. Ụfọdụ bitcoin debit kaadị, Otú ọ dị na ịnye ọnụahịa dị elu karịa waya na-enyefe, nwere ike ịbụ 1% ka 5% kwa azụmahịa.
The bitcoin debit kaadị na enye na-Irite Uru mgbe onye ọrụ na-transacting na kaadị. Ọ bụ ezie na online ịzụrụ ndị na-emekarị free, ma ụfọdụ ndị nwere ike ebubo ụgwọ na na kwa. Igwe ndọrọ ego na-mgbe na ebubo na aka nke ọzọ. The anụ ụlọ ego withdrawals bụ na gburugburu 2-3 USD, mba withdrawals bụ 3-4 USD, ọ bụ na-ekwe omume na ọnụego ewepụghị na-etinyere n'akụkụ percentages. Ọ bụrụ na ndị zuo ma ọ bụ ndọrọ ego ego bụ dị iche iche karịa ndabere ego nke akaụntụ niile na enye ana ihe mmezi mgbanwe ego ọnụego nke 3%.
Client Nzaghachi na User Ahụmahụ
Good ọrụ amalite na a ọma ọdịda page. Ọ ga-abụ doro anya ihe bụ ọrụ na ego ole ka ọ na-eri. The ahịa jiri website chọta mkpa ọmụma banyere ọrụ. N'akuku a doro anya menu Ọdịdị na FAQ; na enye kwesịrị ịgụnye a search arụmọrụ n'ime ya. Ahịa afọ ojuju na-ukwuu dabere na-akwado nyere site bitcoin debit kaadị issuers, dị ka tiketi usoro, Hotline Live chat.
E nwere ọtụtụ ohere a bitcoin kaadị na-eweta ike na-enye n'ihi na ya ahịa. The kacha mma bitcoin debit kaadị eweta bụ dabere na kpọmkwem onye ọrụ mkpa.